20 Ngabona futhi ingelosi yehla ivela ezulwini inesihluthulelo sakwalasha+ neketanga elikhulu esandleni sayo. 2 Yambamba udrako,+ inyoka yokuqala,+ onguDeveli+ noSathane,+ yambopha iminyaka eyinkulungwane. 3 Yamjikijela kwalasha,+ yavala, yabeka uphawu phezu kwakhe, ukuze angabe esazidukisa izizwe ize iphele iminyaka eyinkulungwane. Ngemva kwalezi zinto kumelwe athukululwe isikhashana.+ 4 Ngabona nezihlalo zobukhosi,+ kwaba khona abahlala kuzo, banikwa amandla okwahlulela.+ Yebo, ngabona imiphefumulo yalabo ababulawa ngembazo ngenxa yokufakaza ngoJesu nangenxa yokukhuluma ngoNkulunkulu, nalabo ababengazange basikhulekele isilo sasendle+ noma umfanekiso waso+ futhi ababengalwamukelanga uphawu ebunzini labo nasesandleni sabo.+ Baphila futhi babusa njengamakhosi+ kanye noKristu iminyaka eyinkulungwane. 5 (Bonke abanye abafileyo+ abazange baphile yaze yaphela iminyaka eyinkulungwane.)+ Lokhu kuwuvuko lokuqala.+ 6 Uyajabula+ futhi ungcwele+ noma ubani onesabelo ovukweni lokuqala; ukufa kwesibili+ akunalo igunya phezu kwabo,+ kodwa bayoba ngabapristi+ bakaNkulunkulu nabakaKristu, babuse njengamakhosi kanye naye iminyaka eyinkulungwane.+ 7 Ngokushesha nje lapho isiphelile le minyaka eyinkulungwane, uSathane uyothukululwa aphume etilongweni lakhe, 8 aphumele ukudukisa izizwe ezisemagumbini womane omhlaba, uGogi noMagogi, ukuze azibuthele ndawonye empini. Isibalo sazo singangesihlabathi solwandle.+ 9 Zanyukela ebubanzini bomhlaba zahaqa ikamu labangcwele+ nomuzi othandekayo.+ Kodwa kwehla umlilo uvela ezulwini wazishwabadela.+ 10 UDeveli+ owayezidukisa waphonswa echibini lomlilo nesibabule lapho kakade kwase kukhona khona isilo sasendle+ nomprofethi wamanga;+ bayohlushwa imini nobusuku kuze kube phakade naphakade. 11 Ngabona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nalowo owayehlezi kuso.+ Umhlaba nezulu kwabaleka phambi kwakhe,+ indawo yako ayibange isatholakala. 12 Ngabona abafileyo, abakhulu nabancane,+ bemi phambi kwesihlalo sobukhosi, futhi imiqulu yavulwa. Kodwa nomunye umqulu wavulwa; umqulu wokuphila.+ Abafileyo bahlulelwa ngokwalezo zinto ezazilotshwe emiqulwini ngokwezenzo zabo.+ 13 Ulwandle lwakhipha abafileyo ababekulo, nokufa neHayidesi kwakhipha abafileyo+ ababekukho, bahlulelwa ngamunye ngokwezenzo zabo.+ 14 Ukufa+ neHayidesi kwaphonswa echibini lomlilo. Lokhu kusho ukufa kwesibili,+ ichibi lomlilo.+ 15 Ngaphezu kwalokho, noma ubani ongatholakalanga elotshiwe encwadini yokuphila+ waphonswa echibini lomlilo.+